नियात्रा Archives - Kavyalaya - काव्यालय
by As Kirati १३ भदौ २०७७
माफ गर्नुस् यस्तो बेला ‘यात्रामा जाऔँ’ भनिरहेको छु । तर, तपाईंले त्यति धेरै चाहिँ सोच्न हुन्नथ्यो ! भिड मच्चाउने यात्रा गर्न लागेको होइन क्या ! कोरोना फैलाउने किसिमको पनि गर्न…
by bikeshkabin ३ फाल्गुन २०७६
हामीलाई किताबले ज्ञान दिन्छ । अथाह ज्ञान दिन्छ । तर सम्पूर्ण ज्ञान दिँदैन । जुन ज्ञान किताबले पनि दिन सक्दैन, त्यो यात्रा अथवा भ्रमणले दिन्छ । अन्तर्मनको यात्राले हामी को…
by bikeshkabin १८ माघ २०७६
“हावे बाजे” तिम्रै हावेचौरमा बसेर मीठो हावा खाँदै आफ्नो मनको पानामा लेखिरहेको छु– हावेचौरको इतिहास बिहिबारे बजारको अद्भूत आत्मीयता पाथीभरा देवी मन्दिरको कथा गुराँस र सुनाखरीको प्रेम ग्रिन टीको स्वाद…
by bikeshkabin ११ माघ २०७६
अहिले हामी पूर्वको धरानमा छौँ । हामी ७०–८० जनाको टोली जेफाले यात्राको निम्ति तम्तयार छौँ । घडीले बिहानको १०ः०० बज्यो भनेर हामीलाई मुस्कुराएर बताइरहेको छ । हामी पनि यात्रा श्रीगणेश…
by rameshbikal २१ मंसिर २०७६